मुख्यमन्त्री चामलिङद्वारा राज्य दिवस सन्देश - Samay Dainik
मुख्यमन्त्री चामलिङद्वारा राज्य दिवस सन्देश
मई, 16, 2019
मेरा सह-सिक्किमेली नागरिकहरू,
44औं राज्य दिवसको शुभ अवसरमा म सिक्किमका मानिसहरूलाई मेरो शुभेच्छा र शुभकामना व्यक्त गर्दछु। विगत 1975 मा राज्यको दर्जा हासिल गरिसकेपछि यस जैविक राज्यको भारतमा सबैभन्दा विकसित, प्रगतिशील र तीव्रगतिमा वृद्धि भएको एउटा राज्यको रूपमा आविर्भाव भएको छ। जब हामी राज्य दिवस मनाउँछौं, तब शिक्षा अनि स्वास्थ्यसहित अन्य व्यापक क्षेत्रहरूमा हामीले जुन अत्याधिक सुधार हासिल गरेका छौं, त्यसैलाई प्रतिबिम्बित गर्दा म अति आनन्दित छु। वास्तवमा, म 12 दिसम्बर, 1994 देखि सिक्किम डेमोक्रेटिक ङ्ग्रण्ट सरकारको 25 वर्षको अवधिका वर्षहरूमा हासिल व्यापकरूपले परिभाषित 25 असाधारण माइलखुट्टी हाम्रा अद्वितीय पदचिन्हहरूका कारण सम्भव भएको उत्सव मनाउन चाहन्छु। यो हाम्रो गहिरो प्रतिबद्धता अनि कठोर मेहनत र यी वर्षहरूको अवधिमा हामीद्वारा विकसित गहन अभिनव अनि कल्पनाशील विकास कार्यक्रमको कारण सम्भव भएको छ।
1. एसडीएङ्ग सरकारले लोकतन्त्रलाई पूर्णरूपमा बहाल गरेको छ र कानूनलाई मजबूतिसित स्थापित गरेको छ। अभिव्यक्तिको पूर्ण स्वतन्त्रता र आन्दोलनको स्वतन्त्रता छ तथा कुनैपनि राजनैतिक विरोधीविरूद्ध एउटै पनि मामिला लम्बित छैन अनि एउटै पनि राजनीतिक बन्दी छैन।
2. विगत 25 वर्षको अवधिमा, पूर्ण शान्ति र सुरक्षा कायम रहिआएको छ र सिक्किम आज भारतको सबैभन्दा शान्तिपूर्ण राज्य बनेको छ। यहाँ कुनै साम्प्रदायिक संघर्ष छैन, कुनै अपराध र आतङ्कवाद छैन र सिक्किम वास्तवमा शान्तिको हरित उद्यानमा परिणत भएको छ।
3. बितेका 25 वर्षअवधि, मानिसहरू निरन्तररूपमा आफ्नो भाग्यका मालिक बनेका छन्। रोजगार, पञ्चायती राज, नगरपालिकाहरू र राज्य विधानसभा जस्ता सामाजिक-आर्थिक गतिविधिका सबै क्षेत्रहरूमा, सिक्किमका मानिसहरू असाधारण उदाहरण लिएर अघि बढिरहेका छन्।
4. सिक्किममा सबै वर्गका समुदायहरूलाई पञ्चायतमा सीट आरक्षण, उच्च अध्ययन आदिको माध्यमद्वारा पूर्ण सुरक्षा र समान व्यवहार गरिएको छ। आरक्षणको दायरादेखि कोही पनि बाहिर छैनन्।
5. भारतीय संविधानको अनुच्छेद 371(एङ्ग) अन्तर्गत सिक्किम सब्जेक्ट दस्तावेज, रूल 4.4 अनि सबै पुराना कानूनहरूलाई पूर्ण सुरक्षा प्रदान गरिएको छ।
6. सिक्किम भारतको एकमात्र राज्य हो, जहाँ मानिसहरूको बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताहरूलाई पूर्णरूपमा सम्बोधन गरिएको छ। सिक्किम पहिलो भोकमरी अनि गरीबीमुक्त राज्य हो। सबैलाई निःशुल्क आवास प्रदान गर्ने पहिलो राज्य हो र जसलाई पूर्णरूपले स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, बिजुली, सडक, शिक्षा र स्वास्थ्य आदिद्वारा समेटिएको छ।
7. ग्रामीण विकासअन्तर्गत 70% बजेट आवण्टित गर्ने सिक्किम पहिलो राज्य हो। 1994 मा एसडीएङ्ग सरकार गठनपछि नै, सत्तरी प्रतिशत योजना बजेट ग्रामीण विकासका लागि छुट्याइएको छ।
8. एसडीएङ्ग सरकारले सिक्किमका मानिसहरूको दीर्घलम्बित राजनीतिक मागहरूलाई पूरा गर्नमा ठूलो सङ्गलता अर्जित गरेको छ, जसमा- 12.12.1994 मा सिक्किममा मण्डल आयोगको रिपोर्ट लागू गर्नु; सन्यासी र थामीलाई 06.12.1999 मा ओबीसी-को दर्जा; जोगी र देवान लाई 04.04.2000 मा ओबीसी-को दर्जा; 22.09.2003 मा बाहुन, छेत्री र नेवार समुदायहरूलाई राज्य स्तरमा ओबीसीको मान्यता; 23.12.2002 मा सिक्किम उत्तर पूर्वी परिषदको 8औं सदस्य बन्यो; 05.04.2003 मा लिम्बू र तामाङ समुदायलाई एसटी-को मान्यता; 26.02.2005 मा लेप्चा-लाई आदिम जनजातिको रूपमा मान्यता; 10.05.2008 देखि प्रभावी सिक्किमका अधिवासित मानिसहरूका निम्ति केन्द्रिय आयकरमा छूट; 44 वर्षदेखि बन्द रहेको नथुला व्यापार मार्ग 06.07.2006 देखि व्यापारका लागि पुनः खोलियो; 18.06.2015 मा नथुलादेखि कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुनु समावेश छन्।
9. सिक्किम- वरिष्ठ नागरिकहरू र भिन्न प्रकारले सक्षमहरूका लागि व्यापक सुरक्षा सञ्जाल र सामाजिक उपायहरू शुरू गर्ने पहिलो राज्य।
10. सिक्किम- सबै स्तरमा सफलतापूर्वक महिलाहरूलाई सशक्त बनाउने पहिलो राज्य।
11. सिक्किम डेमोक्रेटिक ङ्ग्रण्ट सरकारले 18.12.1996 मा पहिलो औद्योगिक नीति तयार गरेर सिक्किममा औद्योगीकरण शुरू गर्यो। परिणामस्वरूप, सिक्किममा 50 देखि अधिक ङ्गार्मा एकाइहरू छन्, 20 भन्दा अधिक जल विद्युत परियोजना र सिक्किममा धेरैवटा शैक्षणिक संस्थानहरू छन्।
12. सिक्किमले राज्यको 8000 मेगावाट जलविद्युत क्षमतालाई उपयोग गर्दै जल-विद्युत उत्पादनको माध्यमद्वारा ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्यो। राज्य सरकारले आफ्ना जल विद्युत परियोजनाहरूबाट प्रतिवर्ष असल राजस्व अर्जित गरिरहेको छ र राज्यमा चलिरहेका सबै जलविद्युत परियोजनाहरू चालू भएपछि अझ अधिक आयआर्जन गर्नेछ।
13. 1994 देखि सिक्किम पर्यावरण अनुकूल नीतिहरू भएको एकमात्र राज्य हो। ङ्गलस्वरूप वन्य क्षेत्रमा4प्रतिशतभन्दा अधिक वृद्धि भएको छ।
14. सिक्किम भारत अनि विश्‍वको पहिलो जैविक राज्य बनेको छ। सिक्किमको नाम र प्रसिद्धिले सङ्गठित रूपद्वारा विकसित कृषि उत्पादहरूको लागि टाडा टाडासम्म अतिरिक्त मूल्यको यात्रा तय गरेको छ।
15. स्थानीय जनसंख्याद्वारा बोलिने सबै बोली/भाषाहरूलाई राज्य भाषाको रूपमा मान्यता दिइएको छ, जसले सिक्किमका लुप्तप्रायः भाषिक विरासतलाई पुनर्जीवित गर्छ।3अप्रेल, 1995 मा राज्य सरकारले तामाङ, गुरूङ, राई, शेर्पा, मङ्गर अनि नेवार भाषाहरूलाई राज्य भाषाको रूपमा मान्यता दियो र पछि 15 अक्टोबर, 1996 मा सुनुवार भाषालाई पनि राज्य भाषाको रूपमा मान्यता दिइयो।
16. निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने युथ ङ्गर्स्ट’ नीतिका साथ युवा केन्द्रित सरकार; क्षमता निर्माण; स्टार्ट-अप कार्यक्रम; एक परिवार एक नोकरी योजनाअन्तर्गत स्थानीय रोजगार।
17. सिक्किम- सही अर्थमा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। प्रत्येक धार्मिक आस्था र विश्‍वासलाई राज्यमा आदर र सम्मान गरिन्छ अनि धार्मिक संस्थानहरूका सबै आवश्यकता र जरूरतलाई पूरा गर्नका लागि राज्य सरकारद्वारा पूर्णरूपमा संरक्षण गरिन्छ।
18. सिक्किमले बितेका 11 वर्षभरि जीवन प्रत्याशामा वृद्धि दर्ता गरेको छ। यो विकासको सबैभन्दा ठूलो समेतक हो जुन मानिसहरूमा व्याप्त शान्ति, सुरक्षा र खुशीद्वारा सम्भव बनेको छ।
19. सिक्किम तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरूले घरिएको छ र पश्‍चिम बङ्गाल राज्यसित राष्ट्रिय सीमा साझा गर्दछ। सिक्किम छिमेकी भारतीय राज्यको जिल्ला र सबै छिमेकी देशहरूसित सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाइराख्नमा सङ्गल रहेको छ।
20. सिक्किमले भारतमा सर्वोच्च 22 प्रतिशतसम्मको वार्षिक विकास दर दर्ता गरेको छ, जुन देशमा सबैभन्दा राम्रो वृद्धि हो। वार्षिक जीएसडीपी वृद्धि 5454 प्रतिशतभन्दा अधिक छ।
21. पाकिममा 24 सितम्बर, 2018 मा उद्घाटित सिक्किमको प्रथम हवाई अड्डाले वायु मानचित्रमा सिक्किमलाई विधिवत रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। 2010 मा प्रथम सिक्किम पर्यटन नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको थियो।
22. सिक्किम-चारधाम, गुरु रिम्पोछेको प्रतिमा, बुद्ध पार्क र चेनरेञ्जी, लिम्बू अध्ययन केन्द्र, भानुभक्त अध्ययन केन्द्र, श्रीजङ्गा अनि भगवान पर्शुरामको प्रतिमाबाहेक धार्मिक स्थलहरू अनि धार्मिक केन्द्रहरूको विशाल श्रृंखला विकसित/निर्माण गर्ने एकमात्र राज्य हो।
23. सिक्किममा अत्याधुनिक टाशीलिङ सचिवालय; अत्याधुनिक नयाँ एसटीएनएम अस्पतालको निर्माण गरिएको छ।
24. 1994-मा केवल एउटा कलेजको तुलनामा, आज सिक्किममा कूल 28 वटा कलेज र7वटा विश्‍वविद्यालयहरू छन्।
25. सिक्किम वास्तविक अर्थमा पूर्णरूपमा कल्याणकारी राज्यको रूपमा विकसित बनेको छ, जसमा ठूलो संख्यामा कल्याणकारी योजनाहरूको माध्यमद्वारा छात्र, महिलाहरू, भिन्न प्रकारले सक्षमहरू र वरिष्ठ नागरिकहरूलाई सामेल गर्नका लागि पर्याप्त संख्यामा कल्याणकारी योजनाहरूको माध्यमद्वारा पर्याप्त सुरक्षा सञ्जाल लगाइएको छ।
यी केवल केही ऐतिहासिक उपलब्धिहरू हुन् जुन हामीले बितेका 25 वर्षको अवधिमा पूरा गरेका छौं। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक अनि सांस्कृतिक रूपमा अझै पनि धेरै गर्नुपर्ने छ ताकि हाम्रा पूर्वजहरूका आकांक्षाहरू पूर्णरूपमा पूरा साकार हुन र भारतीय मुख्यधारामा सामेल हुने उनीहरूको निर्णयलाई पूर्ण सम्मान प्राप्त होस्।
त्यस प्रक्रियातर्ङ्ग, 10औं राज्य विधानसभा र देशको 17औं लोकसभा गठन गर्न सिक्किमका मतदाताहरूले हालैमा 11 अप्रेल, 2019 को दिन चुनाउको पहिलो चरण अवधि आफ्नो मतदान गरे। सिक्किममा मात्र, 4,32,000 भन्दा अधिक नागरिक मतदान गर्ने योग्य थिए र हाम्रा मानिसहरूको एउटा राम्रो प्रतिशत गोप्य मतदानको माध्यमद्वारा स्वयंलाई व्यक्त गर्न अघि आए। म प्रत्येक मतदातालाई उसको योगदानका निम्ति बधाई दिन चाहन्छु अनि विभिन्न राजनीतिक दलसित सम्बद्ध रहेर चुनाउ लड्ने उम्मेद्वारहरूको सङ्गलताको कामना गर्दछु।
यस महान राष्ट्रको लोकतान्त्रिक परम्परा र हाम्रो अविश्‍वसनीय प्रतिबद्धताको आधारमा, आउनुहोस् हामी सिक्किमलाई अधिक ऊँचाई अनि गौरवतर्ङ्ग लैजाने हाम्रो दृढ संकल्प र प्रयासहरूलाई नवीकरण गरौं। त्यही समय, हामी शान्ति, सद्भाव र भाईचारालाई स्थापित गरिरहौं, जसको निम्ति राज्यलाई असल छविका साथ राष्ट्रमा जानिन्छ। म राज्य दिवस 2019 को यस अवसरमा विभिन्न वर्गअन्तर्गत सबै पुरस्कार विजेताहरूलाई मेरो बधाई व्यक्त गर्दछु र उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछु। तपाईंहरूको सङ्गलताले अरूलाई राज्यका निम्ति कठोर परिश्रम गर्नलाई प्रेरित गरोस्। तपाईंहरू सबैलाई राज्य दिवस 2019-को शुभकामना दिँदछु।
छैटौंपल्ट पनि पवन चामलिङको नेतृत्वमै सरकार गठन हुनेछ
गोर्खालीगले गोर्खालीगकै प्रार्थीलाई भोट नदिने गर्यो आह्वान
Font Size A+ A- D2Total Views1. चामलिङले सोचेछन्ः आफ्नो सिक्किममा सबैलाई पुगिसरी होस्, कोही...
Font Size A+ A- D2Total Viewsबडा उकालोमा पनि ठम्ठम् हिँड्दा रछन् अझै। उनी अघि-अघि...
Font Size A+ A- D2Total Viewsत्यो दिन रातभरि पानी परेर उघ्रेको दिन थियो। केप्टन...
Total views : 1069089